NeXT कम्प्युटर प्रस्तुत स्टीव जॉबको भिडियो | आईफोन समाचार
निश्चय नै धेरै प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले लाग्छ कि तपाईले सबै देख्नु भएको छ स्टीव जर्नल। यदि त्यहाँ केहि छ जुन म व्यक्तिगत रूपमा एप्पलको पूर्व सीईओको बारेमा व्यक्तिगत रूपमा चिन्न सक्छु, यो हो कि उनी एक महान संचारकर्मी थिए, कोही मरुभूमिमा बालुवा बेच्न सक्थे, कोही ठूलो मान्छेलाई पक्का गर्न सक्षम थिए र, अवश्य पनि, लगानीकर्ता। उनले "तीन उपकरणहरू" प्रस्तुत गरेको जस्तो प्रस्तुति इतिहासको लागि बाँकी छ: आईपड, एक वेब ब्राउजर र क्रान्तिकारी मोबाइल फोन। वा आइपड, आधुनिक एमपी।। तर कार्यहरूले पनि एप्पल र बाहिर क्यारियर बनायो अर्को यो एप्पल कम्पनीका सह-संस्थापकले शुरू गरेको परियोजनाहरू मध्ये एक थियो।
स्टीव जॉब्सले १ 1988 XNUMX मा नेक्सटी कम्प्युटरको परिचय गरायो। सुरुमा जॉब्स र उसको टीमको लक्ष्य थाल्नु थियो कम्प्युटर शिक्षा र व्यापार मा केन्द्रित, तर तिनीहरूले भविष्यको कल्पना पनि गरेनन् जुन तिनीहरूले प्रतिक्षा गरिरहेका थिए। १ 1996 429 of को अन्त्यमा, एप्पलले यस कम्पनीलाई of XNUMX million मिलियन डलरमा किनेको सुधारको अभिप्रायले NeXTSTEP, पलको म्याक ओएस प्रयोग गरेर। यो खरीदले कार्यहरूलाई कपेरटिनो कम्पनीमा फिर्ता ल्यायो, तर सल्लाहकारको रूपमा। अर्को शब्दमा, यो पूर्व सीईओको सीईओको पदमा अगाडि ढोकाबाट फर्कने पहिलो चरण थियो, तर अन्तरिम सीईओ बन्न अघि होइन।
NeXT प्रस्तुत गर्ने कार्यहरू
NeXT कम्प्यूटरको प्रस्तुतीकरणको भिडियो मेरो लागी सबैभन्दा बढीको लागि हो प्रशंसक स्टीव जॉब्स द्वारा। मलाई लाग्छ किनकि यो साढे दुई घण्टा भन्दा बढीको मूल आधार हो, जुन विशाल बहुसंख्यक व्यक्तिको लागि بورि। हुन सक्छ (जसमध्ये हुनसक्छ, म आफैंलाई पनि सामेल गर्दछु)। यो राम्रो हेर्न मा चासो राख्नेहरुका लागि पनि चाखलाग्दो हुन सक्छ स्टेजिंग, स्टीभ जॉब्स क्यान्सर को कारण प्रस्तुतीहरु छोड्नु भन्दा पहिले सम्म राजा थियो कि केहि चीज। यदि तपाईं यसलाई पूर्ण रूपमा देख्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईं यो प्रस्तुतीकरणको बारेमा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » स्टीव जॉब्सको NexT कम्प्युटर परिचय अज्ञात भिडियो
यसले काम गर्दैन!!!!
नहर डे इसाबेल II गेस्टियन अनुप्रयोगको साथ तपाईंको पानी बिल प्रबन्ध गर्नुहोस्